काठमाडौं – नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत अधिकृतस्तरदेखि माथिका सबै कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन सङ्घीय सरकारबाट गर्न माग गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालै सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीमार्फत प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट दशौँ तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । सङ्घका महासचिव महेश्वर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियामार्फत […]
सप्तरी – सप्तरीमा पहिलोपटक सिटीस्क्यान र सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) सेवा शुरु हुने भएको छ । रुपनी गाउँपालिकास्थित युनिक अस्पतालले सिटीस्क्यान मेसिन जडानकार्य सम्पन्न गरेको अस्पतालका अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । ठाकुरले पाँच भेन्टिलेटरसहितको आइसीयु र पाँच सिसीयुसमेत जडान गरिएको बताउनुभयो । मेसिन नहुँदा सप्तरी जिल्लाका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आइसीयु सेवा र सिटीस्क्यान सेवा […]
गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको अनसन जारी, गैरजिम्मेवार बने अदालत जाने चेतावनी
भुपाल गुरुङ, कविराज खनाल । पोखरा । १४ दिन देखि आन्दोलनरत गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका विद्यार्थीहरुले ४ दिन देखि थालेको रिले अनसन जारी छ । अतिरिक्त शुल्क तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको शुल्क लिनुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको रकमको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने, परीक्षामा सामेल हुन र परीक्षाफल हेर्नमा रोक लगाउन नपाइने लगायतका चार बुँदे माग राख्दै गत […]
काठमाडाैं – आँखामा अचानक बाहिरी वस्तु, धातु, सिसाको टुक्रा प्रवेश गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आँखा माड्नुहुँदैन । – ऐनामा आफैँ हेर्ने वा कुनै सहयोगीलाई आँखामा हेर्न लगाउनुपर्छ । अनि, परेला च्यातेर तल–माथि र दायाँ–बायाँ हेर्ने, बारम्बार आँखा झिम्क्याउने गर्दा त्यो वस्तु निस्कन सक्छ । – साथै, चिसो पानी आँखामा छ्यापेर पानीमा टाउको डुबाएर आँखा […]
काठमाडाैं – लगातार पानी पिउनुपर्दछ, जसले पेटमा ग्यास भरिन नदिनुका साथै शरीर सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्दछ । तर, कोल्डड्रिंक्स पिउनुहुँदैन, जसले झन् ग्यास बढाउँछ । – ग्यास्ट्रिक भएकाले समय–समयमा खानेकुरा खाइरहनुपर्छ । लामो समयसम्म नखाँदा पेटमा हावा भरिएर समस्या हुन्छ । – धूम्रपान, मद्यपान गर्नुहुँदैन । साथै, जंंकफुड सकभर खानुहुन्न । – बढी पिरो, अमिलो, […]
काठमाडौं – विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार इयरफोनबाट ध्वनीको ७० प्रतिशत सुनिन्छ भने त्यसले ८५ डेसिबलभन्दा बढी ध्वनि उत्पन्न गर्छ । यति चर्को ध्वनि सुन्दा कानको पर्दा र भित्री कानको संवेदनशील भित्ताका कोषिकामा क्षति पुग्ने गर्छ । जुन सुन्ने क्षमता कम हुनुको कारण बन्न जान्छ । – यस्ता इयरफोनले कानका नलीको भित्र गहिराइ बनाउने काम गर्छ […]
ल्वाङ खाँदाको अचुक फाइदा
काठमाडौं – ल्वाङ बोटमा बासनादार फूल हुन्छ । जसदलाई सुकाएरु मसला बनाइन्छ । जसमा औषधीय गुणयुक्त युजेनल नामक तत्व हुन्छ । त्यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या समाधान गर्छ । ल्वाङ नियमित सेवन गर्दा मुखमा सेलाइवा नामक रस बढी नै उत्पादन हुन्छ । जसले खाना पचाउन मद्दत गर्नुका साथै एसिडिटीको समस्याबाट राहत दिलाउँछ । ल्वाङको सेवनले रोगप्रतिरोधी […]
घिउ सर्वसुलभ चिल्लो पदार्थ हो । अर्गानिक घिउ निकै स्वस्थकर मानिन्छ । तर, यसको मात्रामा भने ध्यान पु-याउनुपर्छ । घिउ खाएमा अनेक फाइदा मिल्छन् । – घिउले छालालाई स्वास्थ राख्नुको साथै स्मरणशक्ति बढाउन पनि सकरात्मक भूमिका खेल्छ । – कब्जियतका बिरामी भएकालाई घिउ निकै फइदाजनक हुन्छ । – यसले छालामा चमक ल्याउनुका साथै जोर्नीमा घर्षण […]
डा. मीना प्रधान स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ मनमोहन मेमोरियल अस्पताल १. उर्वरता घट्दै जान्छ महिलामा १८ देखि ३० वर्षभित्रको उमेरमा प्रजनन क्षमता उच्च हुन्छ । यसर्थ, यो उमेर बच्चा जन्माउनका लागि उपयुक्त हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा प्रजनन क्षमतामा पनि ह्रास आउन थाल्छ । ३० वर्ष पुगेपछि कम अन्डा निष्काशन हुने भएकाले गर्भ रहने […]
काठमाडौँ – खोकी लागिरहेको छ ? ३८ डीग्री सेल्सियसभन्दा बढी ज्वरोका साथै घाँटी पनि दुखेका व्यक्ति भेटिए अलि टाढै रहनुस् । चिकित्सकहरुको सुझाव छ – ‘भरसक हात नमिलाउनुस् । नमस्कार गर्नुहोस् ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ । श्वासप्रश्वास प्रणालीमा भाइरसबाट लाग्ने संक्रामक रोग (मौसमी रुघाखोकी) का बिरामी अस्पतालमा आउने क्रम बढेको छ […]